Accueil > Gazetin'ny nosy > Tetibolam-panjakana 2018: Tonga dia lany tsy nisy ady hevitra
Tetibolam-panjakana 2018: Tonga dia lany tsy nisy ady hevitra
Tao anatin’ny efa-taona nandinihan’ireo depiote ny tetibolam-panjakana tao amin’ny Antenimierampirenena tao Tsimbazaza dia ity nitranga omaly alarobia faha 15 novambra 2017 ity no isan’ny mora indrindra ny fandaniana azy. Ny teo aloha rehetra dia mba nisy ady hevitra ihany tamin’ny ministera sasantsasany, fa ity nolaniana omaly ity no nandeha ho azy sahala amin’ny soavalin’ny môpera hoy ny fitenenana. Asa na noho ny maha vehivavy an’ilay minisitra ny Vola no anton’izany, na noho ny fahaizany ? Sa kosa ve efa manaonao foana araka ny voalazan’ny filoha lefitra ny Antenimierampirenena Hanitra Razafimanantsoa tamin’ny fivoriana tao amin’ny toeram-pandraisam-bahiny Colbert nandritra ny fandinihan’ny antoko pôlitika momba ny lalàm-pifidianana tamin’ny zoma faha 10 novambra 2017 lasa teo hoe : «Na inona na inona tolo-dalàna entina ao amin’ny depiote ao dia lanin’izy ireo izany. Misy aza ny depiote sasany hoy izy tsy mamaky sy mijery akory izany tolo-dalàna izany fa avy hatrany dia mifidy ». Tena resak’adala hoy ny fitenenana. Ny resaka nataon’ireo depiote sendra mba nanontaniana tamin’ity raharaha ity dia nilaza fa avelao hanao izay tiany hatao eo io fanjakana io fa faramparany amin’ny fitondrany izao.
Ny depiote 86 tonga nivory tao Tsimbazaza omaly dia nandany io tetibola io tsy nisy ady hevitra mihitsy. Ny fanazavana nataon’ny avy amin’ny ministeran’ny Vola no nandany andro tamin’izany. Adiny 2 monja dia vita ny fandaniana ity tetibola ity.
6 350 941 187 000 ariary no vola heverina fa hampidirin’ny fanjakana ao amin’ny tahirimbolam-panjakana ny taona 2018 hoavy io. Ny taona 2017 dia
5 893 232 059 000ariary ny fanitsiana ny tetibola 2017, izay nitombo 457 709 128 000 ariary.
Ny tetibolan’ny filoham-pirenena dia nitombo be dia be satria 109 622 522 000 ariary izany ny taona 2017 dia tafakatra 132 miliara 622 tapitrisa ariary mahery izany amin’ity taona 2018 ity. Nitombo eo 20 miliara ariary mahery izany. Ny an’ny praiminisitra indray dia nihena satria raha 189 miliara ariary mahery izany ny taona 2017, dia 147 miliara ariary latsaka kely izany ny taona 2018 ho avy io. Ny ministeran’ny Fampianarana no manana tetibola be indrindra izay mahatratra 1 070 miliara ariary mahery. Ny fiarovam-pirenena sy ny foloalindahy dia nitombo be koa satria 208 miliara ariary izany teo aloha dia lasa 242 miliara ary amin’izao fotoana izao. Ny ministeran’ny Fifandraisana no kely indrindra, izay 11 miliara ariary ihany.
Raha toa ka jerena indray ny vola holaniana amin’ny taona 2018 io dia mahatratra 7 570 miliara ariary mahery izany. Vola mitentina 1 220 miliara ariary mahery izany no ho fatiantoka tsy maintsy hotadiavin’ny fanjakana amin’ny taona 2018 io raha toa ka tiana handeha ny raharaham-pirenena, raha io sora-bola voalaza eny ambony io no ho tanterahana.
Marihina fa ny 70% ny tetibolam-panjakana Malagasy dia miankina amin’ny mpamatsy vola avy any ivelany avokoa. Hatramin’izao nefa dia tsy mety manome vola ho an’i Madagasikara loatra ireo mpamatsy vola ireo ho entina hampandroso. Ny fanampiana amin’ny ady amin’ny fahantrana ka ny fiahiana ny olona mahantra sy marefo no ataon’izy ireo hatramin’izao. Noho izany dia tsy misy zavatra azo antenaina hiova eto amin’ny firenena raha ity tetibolam-panjakana 2018 no asian-teny fa ny mbola omaly tsy miova hatrany no ho fiatraikan’izany amin’ny vahoaka sy ny firenena.